शपथग्रहण हो कि? हास्य सिरियलको रिहर्सल, राष्ट्रपतिले शपथ गराउदा प्रधानमन्त्री भन्छ: त्यो पर्दैन। - Malayakhabar
होम पेज फिचर शपथग्रहण हो कि? हास्य सिरियलको रिहर्सल, राष्ट्रपतिले शपथ गराउदा प्रधानमन्त्री भन्छ: त्यो...
[ टिप्पणी ]
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई तीन वर्षदेखि हसाइरहनु भएको छ । उहाँ बिरामीका सामु पुगेर, शोकमा डुबेकाहरू नजिक पुगेर र शवसामु उभिएर पनि हसाउने अनेक शब्द, उखान, टुक्का र कामहरू ग्रिरहनु भएको छ । अक्सिजनका अभावमा मर्नेहरूको ताँतीमा पुगेर पनि उहाँको सायद प्रहसन रोकिने छैन होला । शवलाई चितामा राख्ने समयमा पनि जोकहरू भन्ने जंगली दृश्य कुनै दिन देखिने हो कि भन्ने शंसय हुँदैछ । तीन वर्षयता नेपाली जनताले अनुभव गरेको यथार्थ यही नै हो । हास्य कर्म नराम्रो होइन । स्वास्थ्यका लागि पनि जरुरी हुन्छ । कदाचित् नेतृत्वको पद परित्याग गरी ओलीले कमेडी च्याम्पियनको सिरियलमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुभएमा नेपालमा सायद एक नम्बरको हास्य कलाकार भनेर ख्याति कमाउनु हुनेछ । तर, सरकारको नेतृत्वमा बसेर उहाँले गरिरहेको प्रहसनले कुनै ख्याति होइन कुख्याति कमाइरहेको छ।
पछिल्लो प्रहसन वैशाख ३१ गते शीतल निवासको शपथग्रहण कार्यक्रममा देखियो । लाजले पनि लाज मान्नुपर्ने गरी प्रदर्शित त्यो प्रहसन असभ्यता र अपसंस्कृतिको बिम्व नै हुनुसक्छ । संविधानमा तोकिएका शब्दहरूलाई शपथ गराउने अधिकारीले वाचन गर्ने र जिम्मेदारी लिन तयार व्यक्तिले पुनर्वाचन गर्ने प्रचलन संसारभर छ । जसलाई शपथ भन्ने गरिन्छ । शपथ अर्वाचीनकालदेखि नै प्रचलनमा छ । राजा, शिष्य, शासक, मन्त्री वा कुनै पनि जिम्मेदारहरूले जिम्मेदारी लिँदा निर्धारित काम निष्ठापूर्वक गर्ने प्रतिज्ञा हो शपथ । शपथको अर्थ वसन्तकुमार शर्मा नेपालले संग्रहित गर्नुभएको कोष ः नेपाली शब्दसागरमा उल्लेख भएअनुसार ः किरिया, धर्म भाक्नेकाम, प्रतिज्ञा, कवोल उल्लेख छ । शपथग्रहणको अर्थ : काम गर्ने वा पदभार सह्याल्ने कुराको दृढ वचन दिने काम, प्रतिज्ञा, कबोल, किरिया हाल्ने काम, शपथ गर्नु शपथ खानु भन्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानमा समेत शपथ निर्धारित छ । तर शपथ खानेहरूले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्दै आएका छन् । हो शपथ खानेहरूले शपथअनुसारको व्यवहार पूरा गरेका छैनन् । तर, शपथलाई नै जोक्समा परिणत गर्नेहरूबाट त जनताले के आशा गर्ने ?
शपथ पत्रमा ईश्वर, जनता र देशका नाममा शपथ गराउने व्यवस्था छ र यिनकै नाममा प्रतिज्ञा गर्छु भन्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले ईश्वर शब्दको कुनै उच्चारण गर्नुभएन नै, देश र जनताका नाममा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्न अस्वीकारसमेत गर्नुभयो । दुई पटकसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्मरण गराउँदा उल्टै परिवारको कुनै कनिष्ट सदस्यलाई हप्काएको जस्तो गरी, अत्यन्त हेयशैलीमा, राष्ट्रपतिको मर्यादाविपरीत असभ्यतापूर्वक प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भनी इन्कार गरिरहनुभयो । त्यसबेला राष्ट्रपतिको हाँसो पनि मर्यादा सुहाँउदो भएन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा नेताहरूबाट वर्तमानलाई गरिने सम्बोधन, व्यवहार र शारीरिक भावभंगीमा भविष्यका लागि उदाहरण हुन् र ती भविष्यका पुस्ताका लागि हस्तान्तरित हुनेछन् । के हामीले त्यस शपथग्रहण समारोहको त्यो दृश्य भावी पुस्ताको धरोहरका रूपमा उदाहरण बनाउन र हस्तान्तरण गर्न सक्छौं ? कुनै औपचारिक समारोहमा राष्ट्रपतिका सामु प्रधानमन्त्री के त्यसरी नै प्रस्तुत हुनुपर्ने हो ? अथवा राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्रीको त्यो असभ्य व्यवहारप्रति हलुका रूपमा हाँसेर पन्छाउनुपर्ने हो कि गम्भीर भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो ? समाजमा अनेकथरि मानिसहरू हुन्छन् र अफवाहका स्रोतहरू हुन्छन् ती । त्यस्ता अफवाहका स्रोतहरूलाई समेत मलजल हुने गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले औपचारिक समारोहमा देखाउनुभएको व्यवहार कुनै पनि अर्थमा आलोचनायोग्य र निन्दनीय छ । प्रभावशाली सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनले शपथग्रहण समारोहलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको थियो त्यसबेला । त्यो दृश्यले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका पक्षधरहरूलाई आहत तुल्याएको छ । भाटगिरी गर्नेहरूको सोच फरक होला, उनीहरूको बाध्यता होला हरेक कुराको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने । तर, त्यस्तो प्रतिरक्षा स्वामिभक्त बाँदरको कथामा रूपान्तरित हुनुहुँदैन । अन्य राजनीतिक विषयभन्दा पनि यो टिप्पणीकारको आशय र सुझाव हो ः वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीका पछि अनेक सपूतहरूको रगत पोखिएको छ, शरीर पुरिएको छ, अनेकका घरवास उडेका छन् । यो प्रणालीको जगेर्ना गर्न सकिएन भने तिनको रगतले, बलिदानले सराप्ने छन् । असल लोकतान्त्रिक संस्कृति बसाउन सकिएन भने प्रणाली पूर्ण असफल हुनेछ । प्रणाली सफल गराउन गुरुहरू पनि असल हुनुपर्छ । असल गुरुहरू भने नेतृत्वमा बस्नेहरू नै हुनुपर्छ । किनकि: बडाले जे गर्‍यो काम, हुन्छ त्यो सर्वसम्मत…।
अघिल्लो लेख इजरायली प्रधानमन्त्रीले गाजामा आक्रमण जारी राख्छौं भनेपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिले के भने?
पछिल्लो लेख मलेसियामा कोरोनाले आजमात्रै ३६ जनाको मृत्यु, नयाँ संक्रमित ३,७८० जना फेला पर्यो।